चन्द्र खत्री (स्वामी सत्यव्रत), आदरणीय पाठक वर्ग, आजसम्म जति पनि स्वामी, सन्त, महाराज, योगी, सन्यासी, महात्मा, ब्रह्मचारी, जोगी आदि शब्दहरु छन्, तिनीहरुको अर्थ परम्परित पण्डितहरु, अक्स्फोर्ड डिक्ष्नरी, बृहत् नेपाली शब्दकोष, पौराणिक कालमा रचिएका ग्रन्थहरुको जानकारी र कम्प्यूटरमा राखिएका जानकारीमा सिमित गरिएको छ ।
के हाम्रो कुनै नयाँ सिर्जना हुन सक्दैन र ? हामीहरु जस्ता मानिसहरुले नै हो अक्स्फोर्ड डिक्ष्नरी, बृहत् नेपाली शब्दकोष, पौराणिक कालमा रचिएका ग्रन्थहरुको जानकारी र कम्प्यूटरमा यस्ता जानकारी राख्ने काम गरेका ।
त्यसैले आजसम्म स्वामी हुनको लागि विवाह गर्नु हुन्न ? स्वामी हुनेले जस्तो पायो त्यस्तो कपडा लगाउन हुन्न ? स्वामी हुनेले यस्तो खान हुँदैन ? के हो यो ? कुन दुनियामा जिएका छौँ, हामीहरु ? हाम्रो आफ्नो बैयक्तिक आत्मसात हो अध्यात्म भनेको, स्वयंले आर्जन गर्नु पर्ने कुरा हो स्वामीत्व भनेको । स्वामी भनेको स्वयंले स्वयंलाई जान्ने चिन्ने काम हो ।
यदि ऋषि महर्षिहरुले विवाह नगरेका भए यो संसारमा जनसंख्या नै हुने थिएन, राक्षस पनि र देवता पनि ऋषिकै सन्तान हुन् । जसले राम्रो काम गरे ती देवता कहलिए र जसले नराम्रा कार्यहरु गरे ती राक्षस कहलिए । दीति र अदीतिको प्रसङ्ग पनि हामीहरुले सुनेका छौँ देवता र दानव यिनकै सन्तान हुन् ।
ब्रह्मा, विष्णु र महेश्वर भनेर हामीहरुले सृष्टि कर्ता, पालन कर्ता र संहार कर्ताको रुपमा चिन्ने गछौँ । त्यो सबै हामीहरुको बाल्याबस्था, यौवनाबस्था र बृद्धाबस्थाको प्रतिकका रुपमा आएका छन् । ब्रह्माका पुत्र राजर्षि, गुरु महर्षि बसिष्ठ हुन्, बसिष्ठका पुत्र शक्ति हुन् । शक्तिकी पत्नी स्वरुपा हुन्, शक्तिबाट परासर जन्मिए, परासरकी पत्नी कुण्डिनी र मत्स्यगन्धा थिए ।
कुण्डिनीबाट ऋषि कौडिन्य जन्मिए भने उनै कौडन्यका सन्तान न्यौपाने, आचार्य, सापकोटा, पराजुली, बासकोटा, समेत २०–२१ थर नेपालमा र बाजपेयी समेत भारतमा २३–२४ थर गरी एकै ऋषिका ४५–४६ थर चलेका छन् र अन्य अन्य परासर, ब्यास, भारद्वाज, कौशिक, उपमन्यू, गौतम, वत्स, कष्यप, वशिष्ठ समेत सयौं गोत्रहरू र तिनका विभिन्न थर चलेका छन् । मत्स्यगन्धाबाट ब्यास, चित्राङ्गद् र विचित्रविर्य जन्मिए र महाभारतको प्रसङ्ग शुरु भयो । यसरी हेर्दा यो संसार नै ऋषि महर्षिका सन्तानबाट संचालित छ भन्ने कुरा प्रमाणित तथ्य हो ।
संसारको सृष्टि ऋषिबाट नै चलेको हो चाहे ती दानव हुन् वा मानव, चाहे ती राक्षस हुन् वा देवता । देवताहरु पनि यस धर्तीमा मानव भएर जन्म लिनको लागि तड्पिन्छन्, यी सबै प्रतिकात्मक छन् कारण मानव जन्मबाटमात्र मोक्षको अवधारणा राख्न सकिन्छ र मानव जुनीबाटमात्र मोक्ष सम्भब छ । अब अलिकति दैत्यहरुको, राक्षसहरुको प्रसङ्ग लिनु समय सापेक्ष होला । आजसम्म भएका युद्धहरुमध्ये स्कन्द कुमार र तारकासुरको युद्ध, राम र रावणको युद्ध, कृष्ण र कंशको युद्ध, महाभारतको युद्ध आदि आदि महत्वपूर्ण मानिन्छन् । ती राक्षसहरु वा भनौ रावणका बाबु आमा को थिए, हिरण्य कश्यपका बाबु आमा को थिए, के तिनीहरु पनि ऋषि नै थिए त ? भन्ने जिज्ञासा उठ्नु स्वभाविकै हो ।
धार्मिक ग्रन्थ अनुसार विष्णु भगवान्का द्वारपालहरु जय विजयले कसरी यस धर्तीमा विभिन्न राक्षस योनीमा जन्म लिनु पर्यो भन्ने तर्पm हेरौँ । साना साना प्रसङ्गहरु आउँछन् । विष्णु भगवान् जतिबेला योग निद्रामा थिए, त्यस बखत लक्ष्मी विष्णु कहाँ जान खोज्दा नचिनेर भनौ वा विष्णु भगवान्को आज्ञा पालन गरेर जय र विजयले लक्ष्मीलाई भित्र जान नदिएकाले उनीहरु श्रापित थिए कि उनीहरुले भेदबुद्धि र मन्द बुद्धि राखेकाले सद्बुद्धि नभएका अविवेकी राक्षस कुलमा जन्म लिन परोस भन्ने श्राप पाएका थिए ।
अर्को तर्पm सनक, सनन्दन, सनातन, सनतकुमार, नारद, ऋभु, हंस, अरुणी, यति समेत ९ ब्रम्हचारी रहेका थिए । ऋषिहरु पनि विष्णु लोकमा आउँदा जय विजयले द्वारमा रोकेका थिए त्यस कारणले पनि उनीहरु यसै गरी श्रापित हुन परेको थियो । अर्को तर्पm नारदको अनुहार विवाहको लागि ब्याउलो भएर जाँदा बाँदरको बनाउने विष्णु र उनका द्वारपालेहरु जय विजय पनि श्रापित भएका थिए । राक्षस जुनीमा तीन पटकसम्म जन्म लिनु पर्ने श्राप अनुसार उनीहरुको अब जन्म शुरु हुन्छ र विष्णुको बचन अनुसार उनीहरुलाई लामो समयसम्म धर्तीमा रहनु नपर्ने र उनीहरुलाई विभिन्न अवतार लिएर विष्णु भगवान्ले नै मुक्त गराउने, किनकि उनीहरु विष्णुका द्वारपालेहरु थिए र आज्ञाकारी पनि थिए । यसरी तीन तीनतिरबाट श्रापित भएका जय विजयको बारेमा केही छोटकरीमा बताउँन चाहन्छु ।
पहिलो जन्ममा उनीहरुले कश्यप ऋषिको उग्र तेजद्वारा दितिको गर्भमा हुर्कने अवसर पाए । उनीहरु यति तेजस्वी थिए कि सूर्यको तेजसम्म पनि कम हुँदै गएको थियो । ती गर्भका बच्चाहरु अति नै तेजस्वी र शक्तिशाली हुने तर हुनेलाई टार्न नसकिने हुँदा थाहा भए पनि कश्यप र दितिले केही गर्न सकेनन् । उनीहरुलाई थाहा थियो कि उनीहरुले असुर वंशका भएर कार्य गर्ने दिति र कश्यपलाई थाहा थियो ।
त्यसैले दितिले जति लामो समय गर्भमा राख्न सक्थिन्, राखिन् अन्त्यमा एक सय वर्षपछि दुई जुम्ल्याहा छोराहरु पैदा भए, तिनीहरुको जन्मको समयमा पृथ्वी, स्वर्ग र अन्तरीक्ष तीनै लोकमा अपसकुन र उत्पात मच्चियो, विश्व ब्रह्माण्डमा नै अपसकुनका यत्रतत्र सर्वत्र लक्ष्यणहरु देखिए । ती दुबै बालकको नाम प्रजापति कश्यपले हिरण्यक्ष र हिरण्यकशिपु राखे । विष्णु भगवान्ले आप्mना दुतहरु वा द्वारपालेहरुलाई मारेर मुक्ति दिए ।
आप्mनो दोस्रो अवतार वराह रुपबाट हिरण्यक्षलाई वध गरे भने आप्mनो चौधौँ अवतार नरसिँह अवतारबाट हिरण्यकशिपुको बध गरे । ती जय विजय द्वारपालेहरुले दोस्रो जन्म विश्रवा मुनि र केशिनीको गर्भबाट राक्षस योनीमा रावण र कुम्भकर्ण भई जन्म लिए । विष्णु भगवान्ले अठारौँ अवतारको रुपमा रामको रुपमा आई रावण र कुम्भकणई बध गरे ।
रावणले देह त्याग गर्नुभन्दा पहिले राम तपाईंले ले छल गरेर विभिषणको पछिल्तिरबाट मेरो बध गर्नु भयो, तपाई बहादुर हुनुहुन्थ्यो तर मलाई युद्ध गरेर नहराई किन यसो गर्नु भयो भन्दा रामले अहिले मैले अब के भनौँ धेरै ढिला भइसक्यो तर अर्को जन्ममा म कृष्णको रुपमा आउँदा तिमी कंश हुने छौ, त्यतिबेला तिमीलाई लड्ने पूर्ण अवसर दिने छु र यस जन्मको याद पनि गराउँने छु भनेका थिए । कंशका बाबु जनप्रेमी राजा सुरसेन थिए, जसलाई कंशले जेलमा थुनेर आपूmले राज्य गरेको थियो । यसबाट प्रष्ट हुन्छ कि तेस्रो जन्ममा दन्तवक्त्रको ठाउँमा कंश थिए ।
अब तेस्रो जन्मको बारेमा हेर्दा युधिष्ठीरकी सानी आमाका छोरा शिशुपाल र दमघोषका छोरा दन्तबक्त्र भने पनि यहाँ कंश थिए । यिनीहरुलाई पनि विष्णुको पूर्ण अवतार विसौँ अवतारको रुपमा आएका कृष्णले मुक्ति दिलाए । यसरी जति पनि राक्षस थिए, तिनीहरुका आमा र बाबु पनि ऋषि नै थिए । त्यसैले विवाहको विरोधी हुनु कुनै जरुरी छैन र विवाह गरेर ऋषि हुँदैन, स्वामी हुँदैन, सन्त हुँदैन, आत्माज्ञानी बन्न सक्दैन भन्नु अल्पज्ञान हो ।
सन्त भनेको आन्तरिक रुपमा शान्त र बाह्य रुपमा चलायमान हुनु हो । महाराज भनेको तत्व ज्ञानलाई बुझेर आफ्नो आत्मामा नै रमाउनु वा आप्mनो आत्मामा नै राज्य गर्नु हो । योगी भनेको योगमा रहनु हो । सन्यासी भनेको सत्यमा न्यास गर्नु हो । जोगी भनेको दुःषित् कर्महरुबाट जोगिनु हो । ब्रह्मचारी भनेको ब्रह्माण्डलाई नै घर मानेर, कुनै पनि बन्धनलाई नस्वीकारी स्वछन्द रुपमा जीवन जिउनु हो । महात्मा भनेको आत्मालाई महान बनाउनु वा महानता प्रदान गर्नु हो ।